Dambiyada ka dhaca magaalada Södertälje [Video] | Somaliska
Dambiyada ay geystaan kooxaha gaangiistarada ah ayaa cirka isku shareeray magaalada Södertälje ee duleedka Stockholm iyadoo boolisku ay hada ugu yeerayaan xaalada mid aan horey Sweden loogu arag oo qaadan karta sanado badan in la xaliyo.
Dadkaan dhibaatada ka wada magaalada ayaa la sheegay in ay ku dhexmilmeen bulshada iyadoo ay adeegsadaan dhalinyarada halkaasoo ay ka soo gasho lacago badan, falalka ay geystaan waxaa ka mid ah dhac iyo dil. Booliska ayaa waxay olole balaaran ku qaadan gaangiistarada iyagoo tiro badan xabsiga dhigay.
Gaangiistarada magaalada ayaa la sheegay in ay u badanyihiin soo galootiga iyadoo ay Södertälje ka midtahay magaalooyinka ugu soo galootiga badan Sweden. Booliska ayaa sheegay in ay doonayaan in gacan laga siiyo oo dadku aysan cabsan ee dibada u soo baxaan.
Siyaasada arimaha dibeda ee Sweden